Ahoana no mety ny sehatr'asa mety indrindra ho an'ny mpamorona | Famoronana an-tserasera
Inona no tokony ho endrik'ilay sehatr'asa tonga lafatra ho an'ny mpamorona?
Melissa Perrotta | | mpanakanto, Graphic Design
Rehefa nisafidy ny hianatra famolavolana sary aho dia tena faly. Efa ela aho no nanintona ny hevitry ny fomba fiasa ankoatry ny sisa amin'ireo zavatra tsy mampino ananany. Avy eo dia nanoro hevitra izy ireo fa rehefa misafidy izay hianarana dia tokony eritreretin'izy ireo ny azy sehatr'asa mety. Tokony hiezaka ny hahita ny tenany amin'ny toerana ara-batana ny olona.
Nieritreritra aho hoe hanao ahoana ny mandany ora maro amin'ny filalaovana solosaina sy fihainoana mozika, amin'ny toerana milamina ahafahako mamaky, manao sary na mandoko ary tiako ilay hevitra. Na izany aza, tsy noeritreretiko ny vidin'ny asa misy toetra toy izany, na ara-batana izany na ara-bola. Na dia hifidy an'ity asa ity indray mandeha sy arivo aza aho dia tiako ny milaza amin'ireo mpamorona vaovao izay manomboka ny lalany, amin'ny inona ho hita ny olana.
Eto amin'ity lahatsoratra ity aho dia manonona ny sasany amin'ny singa tsy ilaina ho an'ny sehatr'asan'ny mpamorona ary mety ho hitanao amin'ny fivarotana an-tserasera toa izao VELONA. Voalohany indrindra, misy singa roa tena ilaina izay tsy azo banga ary manoro hevitra ahy aho mba tsy hanadino ny fandaniana. Dia manonona ny hafa aho fa mieritreritra ny hanamora sy hahatonga ny asan'ny mpamorona ho mahafinaritra kokoa.
1 Seza tsara
2 Solosaina mandeha
4 Takelaka sary
6 Tranomboky misy boky maro
Ny seza dia zavatra iray lehibe indrindra ilaina amin'ny mpamorona endrika. Indrindra ho an'ireo mpamorona nandany 8 andro nipetrahana na indraindray aza ora maro kokoa.
Tena zava-dehibe tokoa rehefa misafidy seza birao na seza misy sandry handinika lafin-javatra maro. Voalohany, raiso ny ergonomics. Noho io antony io, dia tokony homarihina fa manana faritra fanohanana lumbar izy ireo, fanohanana an-doha ary mafy orina izy ireo nefa mahazo aina.
Faharoa, ilaina ny fanananao a famolavolana miasa sy azo ovaina. Midika izany fa mamela ny mampifanaraka ny haavony izy, na mifandraika amin'ilay olona na amin'ny birao.
Farany, safidio ny seza arak'izay fitaovana sy loko mahomby. Ilaina ny mahatadidy fa hampiasaina saika isan'andro isan'andro amin'ny herinandro sy mandritra ny ora maro. Noho izany, ho fahendrena ny misafidy fitaovana tsy manimba amin'ny fampiasana azy ary mora diovina, toy ny hoditra. Ho fanampin'izany dia mamporisika anao foana aho hisafidy fanaka miloko mainty, satria miharatsy haingana kokoa ny loko maivana.
Ohatra iray mazava amin'ny seza izay mahafeno ireo toetra rehetra voalaza etsy ambony ireo dia mety ho io maodelin'ny marika io Beliani na dia misy maro hafa mifanaraka amin'ny lamina mitovy aza.
Mamela sary ho hitanao ny teboka manan-danja indrindra rehefa misafidy seza tsara hiaraha-miasa na mandany ora maro eo alohan'ny solosaina:
Fantatra fa mpamorona sary matetika mpankafy ny vokatra Apple. Saingy tsy mieritreritra ve izy ireo fa tsara tarehy sy voalamina tsara? Ny tombon-tsoa azonay amin'ireo gadget gadget misy vidiny lafo dia vokatry ny zava-misy fa misy ny vokatra "Manampy ny mpampiasa". Noho izany ity rafitra fiasa ity dia manamora ny asan'ny mpamolavola. Asa izay mazàna dia mavesatra be ny asany.
Amin'io lafiny io dia miatrika maro ny mpamorona programa mavesatra izay mitaky ny solosaina hahafahana maneuver eo amin'ny fampiasana ny iray sy ny iray hafa miaraka nefa tsy misy ezaka be. Izany no ahafahantsika mijanona tsy tapaka ary manohy ny asa nefa tsy maty akory ny solosaina. Ity fahaiza-manao ity dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo tsara indrindra satria mamela antsika mandrindra ny fikorianan'ny asa. Etsy ankilany, izy io koa dia manana ny fahaizana mamerina ny asa vita alohan'ny fanidiana tsy ampoizina.
Mazava ho azy, misy fatiantoka marobe izay miovaova arakaraka ny vidiny, amin'ny alàlan'ny malefaka kely atolotry ny mpampiasa azy, amin'ny tranga sasany ny tsy fahafahan'ny fanavaozana ny fitaovana. Ho fanampin'izany dia tsy maintsy ampidirintsika koa ny totozy sy fitendry raha nifidy solosaina birao izahay. Na izany aza, mbola ny ankamaroan'ny mpamorona no miaiky fa ny pro dia be noho ny ratsy. Noho izany, ilaina ny manontany tena ... Inona no tena mahomby indrindra ho ahy eo amin'ny sehatry ny asako? Rariny ve ny fandaniana raha jerena ny fizotran'ny asa ananako?
Ny latabatra dia singa iray izay azo fidina amin'ny alàlan'ny fanalefahana bebe kokoa. Amin'io lafiny io dia tokony ho faritana araka ny ny fifandraisana misy eo amin'ny material sy ny loko. Ireo singa ireo no hamaritra ny index index azon'ny biraonao ampiasaina. Ny fitaratra dia ny fahaizan'ny vatana manome taratra ny hazavana tonga amin'ny tontolo iainana. Vokatr'izany dia misy fiatraikany amin'ny fahitan'ny mpampiasa ny fahitany sy ny fahaizany miasa, satria tsapan'izy ireo ireo onja mety hanelingelina ireo. Mifandraika amin'izany, ny filamatra dia ny mifidy latabatra fiasana miaraka amina matte material izay mampihena ny famirapiratan'ny zavatra sy mampihena ny taratra.
Mpamolavola izay manana be dia be ny workflow sy ny fanehoana lanja ny asa tanana fantatr'izy ireo fa zava-dehibe ny fananana takelaka. Amin'izao fotoana izao dia nanjary tsy maintsy ilaina ny fampiasana rindrambaiko solosaina vectorization. Ny olana dia matetika ampiasaina amin'ny baiko mamela ireo fihetsika kely, toy ny totozy.
Ny vahaolana amin'izany dia ny fisehoan'ny takelaka sary. Ireto no fitaovana ahafahanao manatsotra ny fampiasana programa vektor amin'ny alàlan'ny famokarana asa izay mitahiry ny fanehoana kapoka tanana. Etsy ankilany, izy ireo koa dia miara-miasa amin'ny fampandrosoana haingana sy haingana ireo tetikasa.
Heveriko manokana fa ny mozika dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fivoarana famoronana. Tsy misy fisalasalana fa ilaina ny famoahana ny tontolo mamorona amin'ny tontolo iainana izay ahafahana manaitra ny sain'izy ireo. Indrindra raha asa mety ho lasa tena mijapy toy ny famolavolana sary izany. Noho io antony io dia manoro hevitra aho ny handinihana mividiana mpandahateny tsy misy tariby sy portable. Ireto dia gadget azo ampiharina izay mamela ny fampiasana betsaka ary amin'ny ankapobeny ny kalitaon'ny feony dia tsara indrindra. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hametraka ny habaka isika ary hanao azy io ho toerana mahafinaritra kokoa.
Tranomboky misy boky maro
Amin'ny ankapobeny, ny olona tsy mahalala tsara ny famolavolana dia mihevitra fa ny "sary" ihany no ataontsika ary tsy mandalina na inona na inona isika. Na dia tsy azo oharina mihitsy aza ny atiny teôria amin'ny kariera famolavolana amin'ny asan'ny injeniera; tena zava-dehibe ho an'ny mpamorona izany fahalalana be amin'ny sehatra maro. Mitranga izany satria amin'ny ankapobeny, miasa ao / sy ho an'ny faritra maro izay tokony hanana fahalalana izy.
Noho io antony io dia tsy maintsy afaka mahazo vaovao tsy tapaka ary hiverina any aminy amin'ny fotoana mety. Ho fanampin'izany, tsy hampaninona antsika ny mamolavola ny fahalalanay sy ny fotony amin'ny zavatra lazainay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Inona no tokony ho endrik'ilay sehatr'asa tonga lafatra ho an'ny mpamorona?
voankazo dia hoy izy:
Fanamarihana bebe kokoa momba ny vokatra io fa tsy ny tolo-kevitra ho an'ny «sehatry ny asa tonga lafatra na mety». Nihevitra aho fa hiresaka toerana malalaka eo amin'ny latabatra izy ireo fa tsy hameno zavatra manodidina anao, misotro, manondraka, mametraka zavamaniry sasany, manana ny birao afaka amin'ny PC misy rakitra tsy misy ilana azy, sns ... inona no fantatro ... tsara.
Valiny tamin'i Fruno
Ahoana ny fomba hamadihana sary ho sary miaraka amin'ny Photoshop
Endritsoratra 15 tsy maintsy ananana vaovao, maimaim-poana!